Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Mmanya & mmuo » Mmanya French: Mmepụta kacha njọ kemgbe 1970
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • culinary • omenala • Akụkọ kacha ọhụrụ na France • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Mmanya & mmuo
Iko mmanya French
A na-ahụ France maka okomoko ma tinye ya n'usoro a bụ mmanya ya. Mba a na-emepụta ihe dị ka pasent 16 nke mmanya ụwa ma na-ewe ihe karịrị mmadụ 142,000 n'ọrụ na ngalaba na-eto mmanya naanị.
Nnyocha Reuters kpebiri na Mmanya French O yikarịrị ka mmepụta ụlọ ọrụ ga-agbadata ihe dịka pasent 30 n'afọ a, ma e jiri ya tụnyere afọ gara aga, na-eme 2021 dị ka afọ kachasị njọ kemgbe 1970 ma nwee ike ịbụ afọ kachasị njọ na ndekọ.
Ihe kpatara akụkọ ọjọọ a gụnyere ntu oyi nke Eprel, ọgba aghara Covid 19, agha azụmaahịa nke Onye isi ala Trump na-achọ mmanya ndị France, idei mmiri n'oge ọkọchị yana oke okpomọkụ na-eduga n'ichebe ero n'osisi vine nke bibiri ọtụtụ ihe ọkụkụ.
Ndị hụrụ mmanya n'anya kwesịrị inweta mmanya French ha UGBUA na nkwadebe maka oge ezumike ma gbalịa izere ọnụ ahịa abawanye na ndekọ ego.
Sancerre dị na nsọtụ ọwụwa anyanwụ nke mpaghara ubi vine Loire Valley yana nso Cote d'Or na Burgundy karịa mpaghara mmanya ndị ọzọ dị mkpa nke Loire nke Anjou na Touraine. Mpaghara viticultural na-ekpuchi ugwu 15-mile nke na-akpụ akpụ n'akụkụ ọdịda anyanwụ nke Loire yana acres 7000 nke osisi vaịn ewepụtara maka ịmịpụta mmanya vine ahụ.
A na-ekewa ụdị ala n'ime akụkụ atọ: nzu, limestone-grant, na six (flint). A na-akwụkarị Flint maka smoky pierre fusil (gunflint) na-esi ísì ụtọ na ihe kpatara Sauvignon pseudonym Blanc Fume.
A na-ahụ Sancerre maka mmanya ọcha ya na-esi ísì ụtọ nke sitere na Sauvignon Blanc. Sancerre mara mma dị ọcha, na-enwe ntụ ntụ nke nwere ndetu gooseberries, ahịhịa, nettles na mineral. Phylloxera kpochapụrụ nnukwu ubi vine n'etiti narị afọ nke 19 na-ebibi egwu nke ọtụtụ ụdị mmanya na-acha ọbara ọbara dị ka Gamay na Pinot Noir. A ghagharịrị ubi vine na Sauvignon Blanc na mpaghara ahụ nwetara ọkwa AOC na 1936.
2020 Domaine Girard Sancerre. Ihe ndetu. 100% Sauvignon Blanc. Domaine Fernand Girard na-eduzi Alain Girard, na-agbaso nzọụkwụ nke ọgbọ ndị na-aṅụ mmanya na obodo Chaudoux, nke dị kilomita ole na ole n'ebe ugwu ọdịda anyanwụ Sancerre na n'ebe ugwu nke Cavignol. Ubi-vine ahụ na-ekpuchi hectare 14 na Girard na-eresị ndị na-akparịta ụka ụfọdụ cuvees na karama n'onwe ya akụkụ nke mkpokọta mmepụta n'okpuru aha ezinụlọ ya. The La Garenne cuvee sitere na ubi-vine nwere hectare 2.5 na mkpọda ọwụwa anyanwụ chere ihu na mkpọda nke nwere ala okwute okwute. Ala chalky na-eme ka njirimara flinty, ịnweta na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ nke Sauvignon Blanc dịkwuo elu.
Ala ahụ na-eji teknụzụ ọgbara ọhụrụ nke gụnyere pneumatic press, igwe anaghị agba nchara, usoro njikwa okpomọkụ n'oge ịgbara mmiri na oghere ikuku maka ịka nká na vats na karama ịkwakọba. Ọ bụ ezie na teknụzụ dị narị afọ nke 21, a na-eji ụzọ ọdịnala eme ihe n'ubi vaịn ebe a na-eji ahịhịa ahịhịa na ọgwụgwọ eme ihe obere oge, a naghị ewebata yist azụmahịa iji kpalite gbaa ụka ma ọ bụ tinye ụtọ ụtọ. Nsonaazụ bụ Sancerre nke na-enye ísì ụtọ, yana acidity ọhụrụ nwere obere astringency.
Alain Girard - Foto sitere n'aka Noa Oldham
A na-akwụghachi anya ya na ọla edo na-acha odo odo na imi na-achọpụta ose, bee lemon, ahịhịa ndụ ndụ ọhụrụ, apụl akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, ntakịrị lemon na nkume. Azụ na-acha ọcha dị larịị jikọtara nke ọma na ihendori caper mana ọ na-eguzo naanị ya na ike na ugwu.
Gụọ akụkụ nke mbụ ebe a: Ịmụ banyere mmanya nke Loire Valley na NYC Sunday
Bryce Baker ekwu, sị:
November 24, 2021 na 12: 49
Ọzọ "ọ bụ Trump kpatara."
Tarifụ US bụ nzaghachi nye nkwado ezighi ezi nke EU nyere Airbus, dịka WTO siri kwuo. E bu n'obi na tarifụ ndị a ka iweta ego n'ahịa US-EU. Ọ ga-enyere aka ịkọ akụkọ ahụ dum wee kwụsị ịta Trump ụta.